अक्लान्त कौरव Archives | साहित्यपोस्ट
३१ जेष्ठ २०७८ १४:०१ 0
“उनीहरूलाई भनिदिऊँ त तपाईँलाई खाना नबनाउनु भनेर ?” बैरागीले त्यस्तो अचम्भ मानेन । मसिनो स्वरमा उसले इन्द्रसँग भन्यो,“उनलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ । के गरौँ ,न त ?” “केही गर्नु पर्दैन ।” “कइँ र लैठा माछा ल्याएको छु ।” “हामी नै खाउँला ।…
२४ जेष्ठ २०७८ ०६:०१ 0
माधवले भन्यो, “ लालटीन बालेर र कुर्सी सजाएर बसीबसी यस्ता कुरा सोधेर केही फाइदा हुन्न ,बाबुसाहेब । हामीलाई केही भन्नु छैन । शशी बाबु समितिको मुख्य मान्छे हुन् । हामीलाई आधा मजुरी दिन पनि दाँतबाट पसिना निकाल्छन् । उनैलाई सोधेर हेर्नुस न ।…
१७ जेष्ठ २०७८ १५:०१ 0
“अनि किन अचानक मेरो घाँटीमा यो झुण्ड्याउनी अर्थात् ढोलना ? मलाई के सारा गाउँको बारेमा थाहा छ र ? जसलाई थाहा छ तिनलाई किन पठाइँदैन ?” “ थाहा छैन । शायद गोरालाई थाहा होला ।” “गोरा बाबु ? शहर छाडेर ?”गोराले भन्यो,“अवश्य जानेछु । तिमी…
१० जेष्ठ २०७८ १२:०१ 0
चुडामणि पतितुण्ड ग्राम्य जीवनको एउटा अपरिहार्य स्तम्भ हो । चुडामणि जस्ता मान्छे समाजका प्रतिष्ठित अङ्ग हुन् । सरकार आउँछ, सरकार जान्छ तर चुडामणि जस्तालाई छुन चलाउन सक्दैन,उसलाई केही फरक पर्दैन । तर यसपालिको घटना शङकास्पद छ । यसपालि…
महाश्वेता देवीकोः “अक्लान्त कौरव” शृङ्खला १५
३ जेष्ठ २०७८ १४:०१ 0
“कोसँग भनौँ ? कसले बुझिदिने हाम्रो वेदना ? इमान्दार बन्न सक्छौ तर जे गरिरहेका छौ ,त्यसले केही हुनेबाला छैन । फेदमा प्रहार भयो भने शायद केही होला , नत्र त..। सारा जमीन खालि गराऊ ,सारा ..। जोसँग जमीन छैन,तिनीहरूमा बाँडिदेऊ जमीन । यसो गर्न…
२७ बैशाख २०७८ १२:०१ 0
इन्द्रले भन्यो,“आपसमा केही झैझमेला नहोस । मेरो विचारमा यो कुरो तपाईँ खुला हृदयले स्वीकार गर्न सकिरहनु भएको छैन । तपाईँको आफ्नो जमीन हो र ?””अवश्य । सबैको आआफ्नो जमीन हुन्छ ।” “अहँ ,सबैको आआफ्नो जमीन हुँदैन । त्यो जमीन ?” “दर्ता…
२० बैशाख २०७८ १२:०१ 0
”डरको कुरो कसले पो गरेको छ र ? म कसैसँग डराउँदिन । अँ ,बरु प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई सम्झाइबुझाइ गरेर दबाब दिएर ...” ”हृदय परिवर्तन गर्ने भन्नुभएको होला । तिनीहरू डाँका र हामी सर्वोदय कार्यकर्ता (सर्वोदय आन्दोलन: गान्धीको अहिंसावादी…
१३ बैशाख २०७८ १४:०१ 0
“यिनीहरूले के भने त ?” “ पहिले त दुःख मनाउ गरे । हामो काली मेझेनको छोराले केही गर्न सकेन सम्म पनि भने । तर अचेल केही भन्दैनन् ।” “सोरेन , तिमीले केके भन्यौ त ?” दिलीप सोरेन आँखैआँखामा हाँस्यो र भन्न थाल्यो, “ सबै थोक कहाँ सम्झिन…
६ बैशाख २०७८ १४:०१ 0
तुषार पात्र निकै बुद्धिमान र अक्किलदार केटो हो भन्ने कुरो बुझ्न इन्द्रलाई गाह्रो परेन । आफूचाहिँ केही भन्दैन,सबै कुरो अरुबाट नै ओकल्याउन चाहन्छ ।कस्तो बाठो ! अँ ,यस्तै अक्किल बुद्धिको मान्छे मनपर्छ उसलाई । “तपाईँ एउटा काम गर्नुस । काम…
३० चैत्र २०७७ १७:०८ 0
कुरो सुन्दासुन्दै इन्द्रले मनमनै धेरै थोक सोच्यो र भन्यो, “ तिमी अब आराम गर ,रतनदा । म पनि पल्टिन्छु ।” “केही बुझ्दैछौ , कुरो बुझ्दैछौ नि ?” “अँ ,बुझ्दैछु । बिस्तारै बिस्तारै धेरै कुरो छ्याङ्ग हुँदै जाँदैछ । ” “यो कानूनची खुब कराउँछ…